भाग्य बदलिन छोरी नै जन्मिनु पर्छ ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/भाग्य बदलिन छोरी नै जन्मिनु पर्छ !
घर बनाएर नयाँ घरमा सर्दा खेरि त्यस्तै विवाह गरिसकेपछि र सन्तान जन्मेपछि मानिसको भाग्य परिवर्तन हुनेकुरा ज्याेतिषीहरुले जानकारी गराएका छन । कसैका राम्राे हुन्छ भने राम्राे हुने हरुकाे लागि सन्तान ग’र्भमा आएदेखि नराम्राे तथा धन सम्पत्ति नाे’क्सान गर्ने तरिकाले आउने गर्छन् ।शुभ तथा अशुभ भन्ने कुरा समयले जानकारी गराउने हाे ।
राम्राे समयमा राम्राे तथा नराम्रो समयमा खराब दशामा जन्मिएका हुनाले अशुभ हुने हुन्छ । सन्तान भएर मात्रै सुखी हुन्छ भनेर भन्नू हाम्राे कल्पना मात्रै हाे । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
शरीरको उचाइ बढाउन बिहानै गर्नुहोस् यी काम